English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes ) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on December 2, 2012 at 19:02 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ဟင်းလျာအမျိုးအစားတွေ၊ ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ထားတယ်၊ ဘာတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်၊ ဘာအမယ်တွေပါဝင်တယ်ဆိုတာရှင်းပြနိုင်အောင် ဝေါဟာရတွေအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။
Unit 13 Describing dishes (ဟင်းလျာများကိုဖော်ပြခြင်း)
Customer : Excuse me. Could you explain the menu to us, please.
Waiter : Yes, of course.
Customer : What’s in the penne arribbiata?
Waiter : Well, this isapasta dish. It consists of penne,atype of pasta, and
a chilli and tomato sauce. It’s made from chilli, tomato, garlic and basil with pine nuts.
Customer : Umm, sounds good. And what’s the salmon coulibiac?
Waiter : This is made from layers of rice mixed with onions and mushroom,
Fresh salmons and hard-boiled eggs. It’s wrapped in puff pastry and baked in the oven.
Customer : And what’s the seafood dish?
Waiter : This isadish for two people. It contains halfalobster, king
prawns, scallops and mussels. And it’s served warm withacrisp, green salad.
စားပွဲထိုးကောင်းတစ်ဦးမှာရှိသင့်တဲ့အရည်အချင်းတွေကို အကြမ်းဖြင့်အားဖြင့် Skills and knowledge နဲ့ Personal qualities နှစ်ပိုင့်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Skills and knowledge ရဲ့အောက်မှာ
Waiters and waitresses need to have:
knowledge about menu items and wine (ဟင်းလျာစာရင်းနဲ့ဝိုင်တွေအကြောင်းကောင်းစွာသိခြင်း)
food and drink service skills (အစားအသောက်တည်ခင်းဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်)
knowledge of food health and safety (အစားအစာအဟာရနှင့်ဘေးဥပါဒ်ကင်းစေရန်)
good communication and people skills (လူမှုဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်)
organisational skills (ချိန်သားကိုက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုစွမ်းရည်)
selling skills. (အရောင်းစွမ်းရည်)
Waiters and waitresses need to be:
friendly, helpful and polite (ရင်းနှီးဖော်ရွေယဉ်ကျေးခြင်း)
able to remain calm under pressure (ဖိအားအောက်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်တုံ့ပြန်နိုင်ခြင်း)
quick and efficient (လျှင်မြန်သွက်လက်၊ ထိရောက်မှုရှိခြင်း)
reliable and punctual (အားကိုးနိုင်ရမည်။ အချိန်မှန်ရမည်)
tactful and diplomatic (လိမ္မာပါးနပ်သော၊ သံတမန်ကဲ့သို့ပရိယာယ်ကြွယ်ဝသော)
able to work effectively inateam.(သင်းဖွဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း)
ဒါတွေဟာအကြမ်းဖျင်းပြောဆိုတာပါ။ ဒီသင်ခန်းစာနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တာကတော့ ကိုယ်ရောင်းတဲ့ ဟင်းလျာစာရင်းအကြောင်း (menu) ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားပြီး ဧည့်သည်ကိုရှင်းပြနိုင်ရပါမယ်။ ဒါမှသာ စားသုံးသူတွေ ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Excuse me, could you explain the menu to us, please? တဆိတ်လောက်။ ဒီမီနူးလေးရှင်းပြလို့ရမလား
What’s in the penne arribbiata? “ပန်နေးအရီဘီယာတာ” မှာဘာတွေပါလဲ။
This isapasta dish. ဒါကတော့ အီတာလျံ ပါစတာ ခေါက်ဆွဲဟင်းပွဲပါ။
It consists of penne,atype of pasta, အီတာလျံခေါက်ဆွဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “ပန်နေး” ပါပါတယ်။
It’s made from chilli, tomato, garlic and basil. ငရုတ်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ပင်စိမ်း တို့နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
This is made from layers of rice. ထမင်း အလွှာကလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
It contains halfalobster, king prawns, scallops and mussels. ပုဇွန်ထုပ်ကြီး(ကျောက်ပုဇွန်) တစ်ခြမ်း၊ ကင်းပုဇွန်၊ ခုံးကောင်နဲ့ ယောက်သွားတွေပါဝင်ပါတယ်။
it’s served warm withacrisp, green salad. ပူပူနွေးနွေး အကြွပ်ကြော်တွေနဲ့ ဟင်းရွက်သုပ်နဲ့အတူ တည်ခင်းဧည့်ခံပါတယ်။
baked = ဖိုထဲတွင်ထည့်၍ဖုတ်သည်။ ကင်သည်။
butter knife = ထောပတ်ခပ်သည့်ဓါး
dessert fork = အချိုပွဲစားသည့်ခက်ရင်း
fish fork = ငါးနွှင်သည့်ခက်ရင်း
fish knife = ငါးနွှင်သည့်ဓါး
flower arrangement = ပန်းအလှပြင်
hard-boiled egg = အကာရောအနှစ်ပါကြက်အောင်ပြုတ်ထားသည့်ကြက်ဥ
layers = အလွှာ၊ အထပ်
mussels = ယောက်သွား
napkin = လက်သုပ်ပုဝါ
onion = ကြက်သွန်နီ
pepper = ငရုတ်ကောင်း
puff = မလိုင်၊ ယို စသည် ဌာပနာ ပါသော) ကြွပ်ရွသည့် မုန့်။
pastry = ဂျုံမုန့်ညက်နှင့် ထောပတ်တို့ကို ဖုတ်ထား သော ဖုံပွသည့်မုန့်အကာ။
scallop = ခုံးကောင်
spicy = စပ်သော၊ ပူသော
tablecloth = စားပွဲခင်း
Passive voice ကို အရာဝတ္ထုတွေထုတ်လုပ်ပုံ manufacturing process, reports and scientific writing တွေမှာသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ ပြုလုပ်သူဟာအရေးမကြီးဘဲ ပြုလုပ်ခြင်းခံရသည့်အရာ (object) နဲ့ ပြုလုပ်ပုံပြုလုပ်နည်း (action) တွေကိုသာအဓိကထားဖော်ပြချင်တဲ့အတွက် သူတို့ကိုရှေ့တန်းတင်ဖော်ပြကြပါတယ်။
The chef makes ice cream from cream, eggs, and sugar.
The chef makes pancakes from eggs, milk, and flour.
ဒီနမူနာတွေမှာ Ice cream နဲ့ pancake တွေကိုဘယ်သူလုပ်သလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘဲနဲ့ ဘာတွေနဲ့လုပ်သလဲဆိုတာသာရှေ့တန်းတင်ဖော်ပြချင်တဲ့အခါ passive ကိုသုံးထားပါတယ်။ ပြုလုပ်သူကိုဖျောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ (သို့) နောက်တန်းပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ active sentence က object သည် passive sentence မှာ subject နေရာကိုဝင်ယူပါတယ်။
verb ကို past participle သို့ပြောင်းပါတယ်။
active sentence က subject သည် passive sentence မှာ object နေရာရောက်သွားပါတယ်။(ဖြုတ်ချင်လည်းဖြုတ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်)
၁။ အောက်ပါဝါကျတို့ကို passive သို့ပြောင်းပါ။
1. We make pasta from flour, eggs and salt.
2. You makeaMargarita with tequila.
3. The receptionist tells guests about the hotel facilities.
4. The restaurant serves dinner from 7.30 to 11.00.
5. We make dressing from oil and vinegar.
6. The waitress takes your order at the table.
၂။ အောက်ပါတို့ကို passive သုံး၍၀ါကျဖွဲ့ပါ။
e.g The table is laid in the eveining.
table lay in the evening
table cloth place on the table
napkin fold and place on the side plate
knife and fork place each side of the plate
wine glass put above the soup spoon
salt and pepper put in the middle of the table
main course plate take away when the main course is finished
dessert spoon and fork bring with the dessert menu
flower arrangement place next to the salt and pepper
၃။ အောက်ပါမေးခွန်းများကို ပေးထားသည့် prompt များသုံး၍ဖြေပါ။
1. What is ice cream made from?
(cream / eggs/ sugar)
It's made from cream, eggs, and sugar.
2. What doesacontinental breakfast consist of?
(fruit juice/ croissant or bread/ jam/ butter/ coffee)
3. What does the mixed seafood dish contain?
(lobster/ prawns / scallops/ mussels)
4. What doesaMargarita consist of?
(tequila / triple sec/ lime and lemon juice/ ice)
5. What is summer pudding made from?
(bread strips/ raspberries/ sugar)
6. What vegetables does the vegetarian bake contain?
(aubergines/ tomatoes/ onions/ broccoli/ mushrooms)
Permalink Reply by UMyo Min on December 3, 2012 at 16:14
Permalink Reply by padout,layy on December 4, 2012 at 4:52
Permalink Reply by Thike Htun on December 4, 2012 at 9:14
Permalink Reply by Mya Mya Thein on December 4, 2012 at 19:27
Permalink Reply by wai yan phyo on December 4, 2012 at 22:24
Permalink Reply by nilartun on December 5, 2012 at 14:48